ဝူဟန်ရွှေလေဆာ Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
GOLDEN laser - လေဆာကိရိယာများထုတ်လုပ်သူ၏ကမ္ဘာ့ဖလား-ကျော်ကြားအမှတ်တံဆိပ်။
Ltd. , ဝူဟန်ရွှေလေဆာ Co. ,ဒါဟာဒစ်ဂျစ်တယ်လေဆာနည်းပညာ application ကိုဖြေရှင်းချက်ပေးသူနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသုံးပြုသူများအတွက်လေဆာအပြောင်းအလဲနဲ့ဖြေရှင်းချက်ပေးရန်ကျူးလွန်ဖြစ်ပါတယ် 2011 ခုနှစ် 2005 ခုနှစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့်ရှန်ကျန်းစတော့အိတ်ချိန်း၏ကြီးထွားမှုလုပ်ငန်းစျေးကွက်အပေါ်စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။
စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ 10 နှစ်ကျော်ပြီးနောက်, GOLDEN laser တရုတ်နိုင်ငံ၏ဦးဆောင်ခြင်းနှင့်လေဆာကိရိယာများ၏ကမ္ဘာကျော်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာသည်။ High-end ဒစ်ဂျစ်တယ်လေဆာကိရိယာများကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လယ်ပြင်တွင်, GOLDEN laser က၎င်း၏ဦးဆောင်နည်းပညာနှင့်အမှတ်တံဆိပ်အားသာချက်များကိုထူထောင်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်အထည်, အဝတ်အစားနှင့်စက်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အထည်လေဆာ applications များ၏လယ်ပြင်တွင်, GOLDEN laser တရုတ်ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်အလိုအလျောက်နှင့်အသိဉာဏ်လေဆာ application ကိုဖြေရှင်းချက်ပေးအာရုံစိုက်ပါ။
- ဆန်းသစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ရိုးရာစက်မှုထုတ်လုပ်မှုစနစ်များကိုဒစ်ဂျစ်တယ်မှ upgrade ကိုကူညီပါ။
GOLDEN laser ၏ R & D, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အထူးပြုဖြစ်ပါတယ် CO2 လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် , galvanometer လေဆာစက် နှင့် ဖိုက်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် ။ အဆိုပါထုတ်ကုန်လိုင်းထိုကဲ့သို့သောလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း, လေဆာထွင်းထု, လေဆာ marking, လေဆာရောင်ခြည်တန်းဖောက်နှင့်လေဆာတံတားအဖြစ် 100 ကျော်မော်ဒယ်များကိုဖုံးလွှမ်း။
Applications ကိုဒီဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်ခြင်း, ချည်မျှင်နှင့်အထည်, အဝတ်အစား, သားရေဖိနပ်, စက်မှုဇုန်ပိတ်ထည်, ပရိဘောဂ, ကြော်ငြာ, တံဆိပ်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ပိုး, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, ပရိဘောဂ, အလှဆင်, သတ္တုအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အခြားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများပါဝင်သည်။ ထုတ်ကုန်များနှင့်နည်းပညာများ၏တစ်ဦးကအရေအတွက်အားအမျိုးသားရေးမူပိုင်ခွင့်နှင့် software မူပိုင်ခွင့်ရရှိသောနှင့် CE နဲ့ FDA ကခွင့်ပြုချက်ရှိသည်။
စမတ်စက်ရုံ Intelligent အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အဘို့, GOLDEN laser အသိဉာဏ်ထုတ်လုပ်မှု၏စျေးကွက်တောင်းဆိုမှုများမှအပြုသဘောတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း၏ပြည်တွင်းရေးအရင်းအမြစ်များကိုပေါင်းစပ်နှင့်အသိဉာဏ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်ဖန်တီးရန်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာပေါင်းစပ်။ အသိဉာဏ်ထုတ်လုပ်မှုရရှိ၏ထိုအချိန်တွင်သင်တို့ကိုလည်း Real-time ထုတ်လုပ်မှုဒေတာသဲလွန်စနိုင်စွမ်း, Real-time ပြောင်းလဲနေတဲ့ Real-time စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး၏အဆင်ပြေစေရန်ဆောင်တတ်၏, ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးနှင့်ပေးပို့အချိန်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်စဉ်တဖြည်းဖြည်းပိုပြီးအဆင်ပြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆောင်ကြဉ်း, လူ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလျှော့ချပေးပါတယ်။
အနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့် GOLDEN laser ဦးဆောင်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတမဟာဗျူဟာအဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုများလိုက်နာမည်, အမြဲတစေ, အသိဉာဏ်အလိုအလျောက်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်လေဆာရောင်ခြည်၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှဆန်းသစ်တီထွင်မှုစနစ်၏အဓိကအဖြစ်နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှု, စီမံခန့်ခွဲမှုဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်စျေးကွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်ရည်ရွယ်ထား လျှောက်လွှာဖြေရှင်းချက်။
ရေခြားမြေခြားစျေးကွက်မှာတော့ GOLDEN laser ကမ္ဘာတဝှမ်းနိုင်ငံပေါင်း 100 ကျော်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများအတွက်ရင့်ကျက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှုကွန်ယက်ကိုထူထောင်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ TEAM'VE ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေကတော့လှူဒါန်းခဲ့သောအလွန်ကောင်းမွန်သောအမှုအရာ!
"Michelle ငါအခုတော့သင်ကအများကြီးပိုကောင်းအသင်းရှိသည်။ GOLDEN laser နှင့် ပတ်သက်. အသစ်တခုနို့တိုက်ကျွေးရေးရှိသည်။ ဂျိုးနှင့်ဂျွန်ဆင်အလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အရည်အချင်းရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာမေတ္တာရပ်ခံချက်နှင့်အဖြေကိုအချိန်နှင့်အခိုင်အမာနားလည်ပါသည်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်! ၏သင်တန်းကိုသင်တို့သည်လည်းအလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ကြပြီး သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်နားလည်ပြီးတွေအများကြီးစျေးကွက်။ "
"Rita, အစဉ်မပြတ်အမျှသင့်ရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကယောက်ျားတွေကြီးမြတ်ခဲ့ကြပြီးကျနော်တို့အစဉ်အဆက်တို့သည်ခလုတ်နှိပ်ဖို့လိုအပ်လျှင်သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖြစ်လိမ့်မည်။ "
"သင်၏ Galvo လေဆာစက်ကိုတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောအိပ်ဇောရှိပါတယ်; (အမှတ်အသား) ဖြတ်သို့မဟုတ်ရေးသားဖို့အလွန်အစာရှောင်လျက်ရှိ၏စက်၏ဒီဇိုင်းသည်ကောင်းလှ၏စက်ကောင်းတစ်ဦးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသထားတယ်; လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူ; ချိန်ညှိစေရန်လွယ်ကူ။ "
"ဒီစက်ကအရမ်းကောင်းလှ၏။ မစ္စတာရော်ဘင်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေနဲ့အေးဆေး။ သူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ရတာကိုနှစ်သက်ကြတယ်။ ငါမကြာခင်မှာနည်းပညာရှင်မပြောင်းကြဘူးအသစ်အစက်အမိန့်များနှင့်လာမယ့်အချိန်ကိုနှစ်သက်လိုရှိ၏။ မျှော်လင့်ခြင်းအနာဂတ်တွင်ပိုမိုချိတ်ဆက်မှုကိုကြည့်ရှုရန်။ "